Home News Wararkii Ugu Dambeeyay Dilaalkii Xalay ka dhacay Degmooyinka Gobolka Banaadir
Wararkii Ugu Dambeeyay Dilaalkii Xalay ka dhacay Degmooyinka Gobolka Banaadir
Wararka aan ka heleyno degmada Xamar Weyne ayaa waxa ay sheegayaan in Xalay suuqa degmadaasi uu ka dhacay dil ay wiil dhalinyaro ah u geysteen rag hubeysan.
Dilkan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii wiil dhalinyaro uu is hor istaag ku sameeyay rag hubeysan oo telefoon qaali ah ka dhacay gabar ku sugneyd degmada Xamar Weyne, taasi oo ku qeylisay in laga caawiyo sidii telefoonkeeda kooxdan hubeysan uga soo ceshan laheyd.
Wiilka dhalinyarada ah ee la dilay oo lagu magacaabi jiray Ayuub Axmed Daahir Tooxow ayaa ka mid ahaa ganacsatada suuqa degmada Xamar Weyne, wuxuuna ku jiray markii hore gudaha carwadiisa, balse wuxuu ku soo baxay qeylada gabadha.
Raggii dilka geystay oo watay Mooto Bajaaj ayaa durba ka baxsaday goobta, sida ay inoo sheeegeen dad goobjoog u ahaa dhacdadan.
Maalmahan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay dhaca ay geysanayaan ragga hubeysan, welina ma jirto cid wax ka qabata.
Previous articleGen Indha-qarshe oo Digniin u Diray Dhalinyarada Al-shabaab ka Barbar Dagaalameeyso!!
Next articleXildhibaanada Golaha Shacabka oo Muqdisho Kullan ku leh!!
Wasiir Amni oo iscasilay (Aqriso)